रोचक / विचित्र Archives - Page 147 of 152 - Medianp
रबर जस्तै युवतीको शरिर (फोटो फिचर)
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष १०, २०७१०२:१६0
काठमाडौं, यहाँ तश्विरमा एउटी यस्ती युवती देखिएकी छन, जो संसारकै सबैभन्दा धेरै शरिरलाइ मोडन सक्ने खुवी भएकी छन । उनको शरिरलाइ मुडाउने कला देखेर तपाइँहरू सबै अचम्ममा पर्नुहुनेछ । रूसकी ज्लाटा लाइ संसारभरमा जूलियाका नामले पनि
युवा युवती अण्डरवयर मात्र लगाएर सडकमा निस्केपछि युवतीलाई युवकले घुरेर हेरे (फोटो फिचर)
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष ०९, २०७१०५:३२0
एजेन्सी । यि नागां तस्बिर देखेर यो बढ्दै गरेको चिसोमा पेन्ट नलगाई नागींने यि नागाहरु मुर्ख होलान् भन्ने तपाइले सोचीरहनु भएको भए तपाई गलत पनि हुन सक्नुहुनेछ । उनीहरुले कुनै रहर वा अन्य कारणले नभई जनवरी
सेक्स गर्दागर्दै युवती इनारमा खसेपछि प्रेमी टाप कसे !
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०८, २०७१०१:४४0
एक युवती एउटा खेतको बिचमा रहेको इनारको किनारामा आफ्ना ब्वाइफ्रेन्डका साथमा सेक्स गरिरहेकी थिइन । यसै क्रममा अचानक ती युवती उक्त इनारमा खस्न पुगिन । त्यसपछि भएको घटनाले भने मानिसहरूलाइ अचम्मित पार्न सक्दछ । उनीसंग
अनलाइन पोर्नका कारण बिबाहमा कमी !
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष ०८, २०७१०१:२७0
वासिङटन, अमे‍रिकामा निकै युवाहरू बिबाहको बन्धनमा बाँधिन चाहँदैनन । अनुसन्धानकर्ताहरूले भने यस कुरामा युवाहरूको घटदो रूचीलाइ अनलाइन पोर्न भएको बताएका छन । युवाहरूको ‘अश्लीलता को लत ’ उनीहरू बिबाहबाट विमुख हुनुको प्रमुख कारण हुन सक्ने
जिउँदो गोहीको मुखमा टाउँको पसाएपछि… !
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, पुष ०७, २०७११४:३०0
पैसाका लागी यस्तो खतरा मोलेर कर्मचारीहरू गोहीको मुखभित्र अाफ्नो टाउको पसाउँदछन काठमाडौं, के कुनै व्यक्ति केही रूपैयाँका लागी आफ्नो ज्यान खतरामा पार्न सक्दछ? यस प्रश्नको जवाफमा शायद केही मानिसहरूले मात्र यसो गर्न सक्ने बताउलान ।
रूसमा ३० हजार हिरा भएको चट्टान भेटियो !
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, पुष ०७, २०७१०१:५२0
मस्को, रूसको एक खानीमा ३० हजार साना साना हिराहरूले भरिएको एक छुट्टै प्रकारको चट्टान फेला परेको छ । रातो र हरो रंगको यो चट्टान रूसको विशाल उदचनाया हीरा खानीमा भेटिएको हो । नक्सभिलेमा रहेको यूनिभर्सिटी अफ
२४ बर्षको उमेरमा २९९ किलो तौल ! (फोटो फिचर)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, पुष ०६, २०७११४:०१0
काठमाडौं, यहाँ तश्विरमा देखिएकी युवती मात्र २४ बर्षकी छन । उनको तौल भने २९९ किलोग्राम रहेको छ । यी युवती अमेरिकाको ओरेगनमा बस्ने गर्दछिन, उनी आफुलाइ भूतनी मान्दछिन । यी युवती नाम एम्बर हो र वोउनी
आमा छोराले बिहे गर्दा बाबु खुशी हुँदै जन्त गएपछि
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष ०५, २०७११०:३८0
एजेन्सी । बाँच्न पर्च, जे पनी देख्न पाइनी रच भन्ने नेपाली उखान यतिबेला सान्र्दभिक देखिएको छ । समाजमा कहिल्ये नसुनीएको र नदिखिएको एउटा अनौठो घटना फ्रान्समा घटेको छ । जहाँ छोराले आमासँग बिहे गरेका छन्
१२ बर्षदेखि पेटमा कैंची !
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष ०५, २०७१०२:४३0
काठमाडौं, विगत १२ बर्षदेखि उनी यसकारण चिन्तित थिए किनभने खाना खानु उनका लागी एउटा युद्ध जित्नु सरह हुन्थ्यो । मिररमा प्रकाशित एक खबर अनुसार न त उनी राम्रो तरिकालेनै खाना खाना सक्दथे, न त धेरै समय
यो हो ‘कुम्भकरण’ हरूको गाउँ !
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष ०५, २०७१०१:१९0
काठमाडौं, मजाक-मस्तीमा हामी धेरै पटक यो कुरा भन्ने गर्दछौं कि सुत्नु संसारकै सबैभन्दा सजिलो र रमाइलो काम हो । यदि मौका मिल्यो, भने हामी सबै काम छोडेर पनि सुत्ने गर्दछौं । तर, के कहिल्यै सोच्नु भएको